I sixhobo se counterlink sisebenza njani?
Xa udala iphulo lokuqhagamshelana nekhonkco, kufuneka ukwazi ixabiso lekhonkco oyakhayo. Ukuba uyazi ukuba i-backlink ingakanani, unokuhlalutya ukuba imfuneko yakho imali, ixesha kunye nemizamo okanye kungenjalo. Unokuvavanya izixhumanisi ezingenayo ngesandla okanye usetyenzise i-backlink counter tool. Eli nqaku lizinikezelwe kwiinkcukacha zangaphandle zexabiso lokubala kwaye nethemba liya kukunceda ukomeleza umkhankaso wokwakha ikhonkco. Ngoko, makhe sijonge ngakumbi kule ndlela yokuhlola.
Izixhumanisi ezidibanisa nabo
Okokuqala kufuneka uqaphele xa udala izixhumanisi kwiziko lakho. Imithombo yewebhu edibanisa kwisayithi ichaza igunya layo namandla. Iiprojethi eziphakamileyo ze-PR zidibanisa kwi-domain, bhetele ziza kubakho kwiGoogle. Ukuphucula ukubonakala kwewebhusayithi kwikhasi lekhasi lokukhangela kweGoogle, kufuneka ufune ukufumana izixhumanisi ezingenayo kuphela kwimithombo yewebhu.
Izixhobo ezininzi zenkampani yesithathu zinceda ukulinganisa umgangatho wezonxibelelwano ezingenayo. Mhlawumbi uvile ngezinye zazo. Ndincoma ukuphumeza izixhobo ezifana neSemalt Web Analyzer okanye iiArerefs. Ezi zixhobo zingakunika idatha echanekileyo ngokubhekiselele kwimithombo yakho yokwakha yekhonkco. Ngoko nokuba ulinganisa le nto usebenzisa i-DA, i-DR, i-TF, i-CF okanye ngandlela-thile ithole indlela ekhompyutheni le nto isona sinombandela omnye ekunqumeni amandla enxibelelwano (engahambelani).
Ukulinganisa izithuthi ezingenayo
Injongo ephambili yokwakha izixhumanisi ezingenayo kukufumana i-traffic target. Yingakho ukulinganisa ukuhamba kweendlela ezinxulumene nazo kuFANELE. Ukuba umthombo wewebhu uninzi lwezithuthi ezingenayo, kusenokwenzeka ukuba isayithi elihloniphekileyo elinika abasebenzisi umxholo omkhulu. Kuthetha ukuba ii-injini zosesho ziyakuthi zibekwe phezulu kakhulu, zivelise izinga lokuchofoza ngaphezulu, ngaphezulu kunye nokuguqulwa.
Ngokubanzi, imithombo yewebhu eyenza i-traffic eninzi ithathwa njengegunya elifanelekileyo ngenxa yezi zizathu zilandelayo:
I-Traffic njenge-factor factor
I-traffic inenzuzo ukubeka kwiGoogle njengoko le injini yokukhangela ihlola igunya lomthombo wewebhu kunye nokufaneleka kweendwendwe eziza kwiwebhsayithi esuka kwi-organic search. Kuthetha ukuba isayithi ofumana iinqununu ukusuka kwinokunyuka kumgangatho kwaye ngoko ke yenza izixhumanisi ezingaphezulu, ukwenza ukuba iqhagamshelwano lakho elinamandla liqine ngaphezu kwexesha.
Iindawo ezineendlela ezininzi ziza kwenza i-intanethi kwiwebhusayithi yakho nge-backlinks. Kuya kukuchaphazela ngokuqinisekileyo ukuguquka kwakho nokuphakamisa igunya lakho emehlweni e-Google. Nangona kunjalo kunamandla kangakanani okwiingxoxo. Nangona kunjalo, kufuneka uqiniseke ukuba uya kumasayithi anokuzisa izithuthi kumaphepha akho.
Ngamanye amaxesha xa wakha izixhumanisi, kufuneka uqiniseke ukuba uzibeka kwindawo efanayo okanye enye ye-niche web sources ekujoliswe kuyo. indawo. Ngaphezu koko, iinqonkco kufuneka zidibaniswe kumxholo ochaphazelekayo ukunika abasebenzisi ukuqonda okucacileyo koko baya kujamelana nokulandela isixhumanisi sakho esingenayo Source .